China Herbal Tea Lily Zvinhu MuStock Kugadzira uye Fekitori | Bestop
Chinese zita: bai he hua
Chirungu Zita: Lily
ChiLatin Zita: Lilium
Basa repamusoro: Kunyorovesa mapapu, kubvisa kukosora, kubvisa moto, kudzikamisa moyo uye kudzikamisa pfungwa
Lilium (zita resainzi: Lilium) chirimwa chinogara chiripo cheLiliaceae. Inowanikwa kumatunhu akadzikama eanenge makondinendi ese kuchamhembe hemisphere, anonyanya kugoverwa kumabvazuva kweAsia, Europe, North America, nezvimwewo kune mhando dzinopfuura zana negumi dzinowanikwa pasi rese, makumi mashanu nemashanu anogadzirwa kuChina. Mumakore achangopfuura, kune mhando dzakawanda nyowani dzinogadzirwa neyakagadzirwa masanganiswa, senge lily yeAsia, musk lily, perfume lily, sunflower (fire) lily, Lily zvichingodaro. Lily yakashongedzwa mamiriro, mashizha egirini, madzinde uye ane runako, ishoma kucheka ruva rookie. Zita rayo resainzi (Lilium brownii var. Viridulum Baker) inozivikanwawo se qiangshu, fanjiu, Shandan, Daoxian, chongmai, Zhongting, Moluo, chongxiang, zhongfenghua, Baihe garlic, master Fu garlic, suannao mbatatisi, yehehua, nezvimwe.
Mapapu anodzikama, kubvisa kukosora, kudzima moto, kudzikamisa moyo uye kudzikamisa pfungwa.
Inoshandiswa pakukosora nekuda kwekushomeka kwein, ropa mu sputum, palpitation, kushaya hope, kurota uye kufunga.
1. Lily porridge:
Mbishi zvigadzirwa: 50g lily upfu, 60g japonica mupunga, shuga.
Kusiyanisa: tanga kuchenesa ruva uye mupunga, uzviise muhari, wedzera mvura uye wobva wadzvanya nemhepo yakadzika. Kana Lily nejaponica mupunga waibva uye waora, wedzera chakaringana shuga, uye unogona kuzvidya.
Inonyanya kukodzera kune vanhu vepakati nepakati uye vekare vanhu, avo vasina kusimba uye vane hope, low fever uye vanogumbuka.
Uye zvakare, kuwedzera Tremella muPeriji reLily kune basa rakasimba rekusimbisa yin uye kunyorova mapapu; Kuwedzera mung bhinzi kunogona kusimudzira mhedzisiro yekupisa kupisa uye detoxification.
2. Lily muto:
Kusiyanisa: bvisa marara uye geza ruva, sukurudza ruva kakawanda mumvura yakajeka, wedzera mvura muhari, ibike kumusoro kusvikira yaora, wobva wawedzera huwandu hwakaringana hweshuga. Lily soup inokodzera kurapwa kwevarwere veTB. Kunyangwe ichivava zvishoma kana ichidyiwa, inovava uye inotapira kana ikanyatsonaka, izvo zvinoita kuti vanhu vanzwe kunonoka. Kana ikachengetwa mufiriji kwechinguva, icho chakanakisa chando chinwiwa.
Ruva rekutanga ruva pabazi reruva rinogona kutanhwa kana ranyatso zadziswa uye rakajeka. Kana ikavhurwa kare kare, inozokanganisa ruvara ruva. Kana zvanonoka, hazvingokonzere chete kuomarara, asiwo zvinosvibisa peturu nekuda kwekuburitswa kwemukume.
Mushure mekunge yanyatsopera mvura, tinogona kuwana iyo yarapwa Lily tii, iyo inogona kunyoroveswa zvakananga nemvura kana zvichidikanwa kana kusanganiswa nezvimwe zvinoshandiswa.
Pashure: Tsika dzechiChinese Mushonga Mishonga Cyathula Mudzi
Zvadaro: Nyowani Yekukohwa Yakasva Kaffir Lime Peel